घरघरमा तिहार, चोकचोकमा तिहार ‘ह्याप्पी तिहार’
घरघरमा तिहार, चोकचोकमा तिहार ‘ह्याप्पी तिहार’ तिहार लागेसँगै सबैतिर रौनक छाएको छ
विनय ज्याेती आइतबार, कात्तिक १०, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । हिन्दु धर्मावलम्बीको महान् चाड तिहार लागेसँगै सबैतिर रौनक छाएको छ । यमपञ्चक, दिपावली जस्ता नामले परिचित चार्ड फूलको चार्ड हो । काठमाडौंका चोक र घरहरु अहिले विभिन्न प्रकारका फूलले सजिएको छन् । त्यसैले सबैतिर फूलको किनबेच ह्वातै बढेको छ । मानिस आआफ्ना घरको आँगन, दलान, पूजाकोठा, बाल्काेनीमा फूल र झिलिमिली बत्तिले सजाउन व्यस्त बनेका छन् ।
पाँच दिन मनाइने तिहारमा पहिलो दिन(हिजो) यमदूत कागको पूजा गरिन्छ । कागले घरघरमा समाचार ल्याउने विश्वास गरिन्छ । घरको वरिपरि विहानै काग करायो भने ‘शुभ समाचार ल्याउनु’ भनेर भन्ने गरिएको पाइन्छ । घरमा पाउना आउने शुभ अशुभ हुने कुराको सूचना कागले दिने विश्वास पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै आज कुकुर तिहार कुकुरले यमलोक जाँदा बाटो छोडिदिने विश्वास गरिन्छ । त्यसैकारण पनि कुकुरलाई पुजाआजा गरिन्छ । कुकुरले मानिसलाई ३० हजार वर्षदेखि साथ दिँदै आइरहेको छ । घरपालुवा जनावरको रुपमा कुकुरलाई घर र सम्पत्तिको सुरुक्षा गर्ने सुरक्षगार्डका रुपमा पनि हेरिन्छ । बहुप्रतिभाको धनी कुकुरले अनुुसन्धानमा पनि सघाउने गर्दछ ।
कुकुर तिहारको साथै आज लक्ष्मी पूजा पनि हो । तिथीको गडबढीको कारण आज लक्ष्मीपूवा मनाइँदै छ । लक्ष्मीपूजनमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजाआजा, आरधना गरिन्छ । लक्ष्मीलाई अँध्यारो मन नपर्ने भएकाले साँझमा पनि चारैतिर उज्यालो बनाएर दिपावली गर्ने गरिन्छ । यसो गरिएमा बर्षैभरी लक्ष्मीले वरदान दिने विश्वास गरिआएको पाइन्छ ।
साथै तिहारमा मखमली फूलको पनि विषेश महत्व रहिआएको छ । मखमली फूल नओइलाउने भएकाले दिदीबहिनीले भाइटीकाको दिन यही फूलको माला आफ्ना दाजुभाईलाई लगाइदिने चलन रहिआएको छ । सदाझैं यसपाली पनि तिहारमा नेपालका विभिन्न ठाउँ लगायत भारतबाट अत्याधिक फूल काठमाडौंसहित देशका ठूला सहरमा भित्रिएका छन् ।
तिहारमा दिदी बहिनीले दाजुभाईको हार्दिकता, सुस्वास्थ्य, दिर्घायुको कामनास्वरुप सप्तरङ्गी टीका र मखमली फूलको माला लगाइदिने चलन रहेको छ । समाजका अग्रज र बुज्रुक मानिसको भनाइमा तेलको रेखी हालेर मखमलीको माला लगाइदिनु भनेको आपसी सम्बन्ध तेलजस्तै कहिल्यै नसुक्ने र मखमली जस्तै कहिल्यै नओइलाउने बनोस भन्ने हो ।
त्यस्तै, तिहारमा सयपत्री फूल पनि यस्तै मान्यताका साथ प्रयोग गरिन्छ । विशेषत घर सजाउन प्रयोग गरिने सयपत्री माला बनाएर घरका ठाउँठाउँमा लगाउने चलन रहेको छ । तिहारमा घर चिटिक्कै पारेमा वर्षैभरी लक्ष्मीले बास गर्छिन भन्ने परम्मरागत मान्यता रहिआएको छ । त्यसैले मानिसले सयपत्री फूलको प्रयोग गरेर घर सजाउने गरेका छन् ।
तिहारमा फूलका साथै मिठाइको पनि चार्ड हो । तिहारको अन्ति यानेकी भाईटिकाको दिन दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाईलाई सप्तरङ्गी टीका लागाइसकेपछि मिठामिठा खानेकुरा दिने चलन रहेको छ । त्यसैले उपत्यकाको अधिकांश मिठाइ पसलहरु भाईमसला र मिठाईले सजिएका छन् ।
राजपा र समाजवादी पार्टीको चुनावी गठबन्धन ! सम्भावना कति ? बिहीबार, कात्तिक ७, २०७६
१३ बुँदे माग कार्यान्वयन भए गोरखाले देशको ढुकुटी भर्छ मंगलबार, कात्तिक ५, २०७६
जनकपुर घटनापछि जिम्मेवारी थपिएको छ : सांसद शाह सोमबार, कात्तिक ४, २०७६